Grate Bar, ala & Iburu, nozulu, Akwa maka n'efu incineration akụrụngwa. Ndị na-emepụta ihe na ndị na - ebubata ya - Ogwe ọka China, Roller & Bearing, Nozel, Rack maka ngwa mkpofu ahihia. Lọ ọrụ
Nkọwapụta ngwaahịa: GRAT BAR & Roller A usoro nke na-ebunye ihe na-ekpo ọkụ n'ọkụ site na onye na-ajụ ihe na-aga ebe ahụ. Igwe ihe a nwere ọtụtụ igbe n’ime ya bụ ọla. Efere ọ bụla dina n’elu efere dị n'okpuru. A na-ahazi ọkpọkọ njikọ n'otu akụkụ nke efere ọ bụla ma dozie ọkpọkọ na-agbapụta mmiri n'akụkụ nke ọzọ nke efere ọ bụla maka usoro ahụ na-asọ. A na-agabiga efere ndị ahụ site na ọtụtụ ihe tubular nke na-emeghe n'elu akụkụ nke efere ndị ahụ. P ...
Nkọwa ngwaahịa: Ogbe Usoro nke na-eme ka ihe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ site na onye na-ajụ ase nke na-aga ebe ahụ. Igwe ihe a nwere ọtụtụ igbe n’ime ya bụ ọla. Efere ọ bụla dina n’elu efere dị n'okpuru. A na-ahazi ọkpọkọ njikọ n'otu akụkụ nke efere ọ bụla ma dozie ọkpọkọ na-agbapụta mmiri n'akụkụ nke ọzọ nke efere ọ bụla maka usoro ahụ na-asọ. A na-agabiga efere ndị ahụ site na ọtụtụ ihe tubular nke na-emeghe n'elu akụkụ nke efere ndị ahụ. Isi ikuku bụ supp ...
Nkọwa ngwaahịa: Iburu usoro nke ihe na-eme ka ikpochapu ihe na-ekpo ọkụ site na onye na-ajụ ase nke na-aga ebe ahụ. Igwe ihe a nwere ọtụtụ igbe n’ime ya bụ ọla. Efere ọ bụla dina n’elu efere dị n'okpuru. A na-ahazi ọkpọkọ njikọ n'otu akụkụ nke efere ọ bụla ma dozie ọkpọkọ na-agbapụta mmiri n'akụkụ nke ọzọ nke efere ọ bụla maka usoro ahụ na-asọ. A na-agabiga efere ndị ahụ site na ọtụtụ ihe tubular nke na-emeghe n'elu akụkụ nke efere ndị ahụ. Primary ikuku bụ s ...
Nkọwapụta Ngwaahịa: Roller Usoro nke ihe na-eme ka ihe ọkụkụ na-ere ọkụ na-adị ọkụ site na onye na-ajụ ase nke na-aga ebe ahụ. Igwe ihe a nwere ọtụtụ igbe n’ime ya bụ ọla. Efere ọ bụla dina n’elu efere dị n'okpuru. A na-ahazi ọkpọkọ njikọ n'otu akụkụ nke efere ọ bụla ma dozie ọkpọkọ na-agbapụta mmiri n'akụkụ nke ọzọ nke efere ọ bụla maka usoro ahụ na-asọ. A na-agabiga efere ndị ahụ site na ọtụtụ ihe tubular nke na-emeghe n'elu akụkụ nke efere ndị ahụ. Isi ikuku bụ su ...